Dowladda Federaalka ah oo Bilowday Qorshe Dagaal oo lagu Go’doominayo Jubbaland - Awdinle Online
Dowladda Federaalka ah oo Bilowday Qorshe Dagaal oo lagu Go’doominayo Jubbaland
February 07, 2020 (Awdinle Online) – Warar la xaqiijiyey ayaa sheegaysa in Dowladda Soomaaliya ay wada-hadalo la bilaawday gudoomiyaasha degmooyinka gobalka Jubbadda Hoose ee maamulka Jubbaland.
Wararka aan helnay ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah howlwadeenadda Madaxtooyadda Soomaalia ay bilaabeen in ay wada-hadal la galaan gudoomiyaasha degmooyinka, Badhaadhe, Afmadow iyo degaanka Dhoobleey ee gobalka Jubada Hoose iyo kuwa isla magaaladda kismaayo ee maamulka Jubbaland.
“xiriirkii ugu horreeyay ayaa dhacay, waxaana ku jira dadka lala hadlay saraakiisha ciidanka ee degmooyinkaas, waxaana la filayaa in dhawaan si rasmi ah u bilowdo xiriirka labada dhinac” ayuu yiri Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta, isla markaana xog ogaal u ah arirntan jubbaland.
Dowladda Soomaaliya ayaa wado qorshe ay gacanta maamulka Jubbaland uga saareyso degaanada maamulkaasi uu ka taliyo, marka laga reebo magaalada Kismaayo oo uu ku xoogan-yahay maamulkaasi oo iyadana lagu maqan yahay.
Xogtan aan helnay ayaa sheegaya in haddii maamulka Axmed Madoobe lagala wareego degmooyinka aan soo sheegnay ee Jubada Hoose, magaaladda kismaayona khal khal la geliyo ay suurta-gal tahay in si fudud loo saari karo.
Sidoo kale dowladda Soomaaliya ay dooneyso in ay qabsato Jubada Dhexe, ka dibna ay degaanada Jubbaland ka dhisto maamul cusub oo la shaqeyn kara Xukuumadda Federaalka ah.
Talaabooyinkan ayaa imanaya ayada oo dowladda ay iminka si buuxda faraha ugula jirto gobolka Gedo.
Lama oga halka ay ku danbeyn doonto xiisadda Jubbaland iyo dowladda oo gaartay heer aad u xun. Xiisadda labada dhinac ayaa laga cabsi qabaa in ay isu badasho xaalad qabiil hadii aan si deg deg ah loo xalin.
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo Saaka Safar u ah Itoobiya
Next articleChina waxaa laga yaabaa in la dilo 20,000 oo Bukaan oo qaba CoronaVirus